नेपालमा फेरी बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमित, होला त फेरी लकडाउन ? - ramechhapkhabar.com
नेपालमा फेरी बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमित, होला त फेरी लकडाउन ?
आज संक्रमित २ सय ७१ जना निको भएका छन् । तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म ९७ दशमलव ९ प्रतिशत संक्रमित निको भइसकेका छन् । आज संक्रमित एकको निधन भएको छ यो सँगै हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणका कारण निधन हुनेको सङ्ख्या ११ हजार ६ सय २ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आज १ लाख २० हजार ६ सय ५३ जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आज दुईवटा विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षकमा सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै पाँच वटा विद्यालयमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ । यसअघि तुलसीपुर–८ स्थित अस्वारा मावि, तुलसीपुर– ६ स्थित राप्ती बाल एकेडेमी र जनता संस्कृत माविका विद्यार्थी तथा शिक्षकमा कोरोना देखिएको हो । केसीका अनुसार अस्वारामा तीन सुस्त श्रवण विद्यार्थी, छ अन्य विद्यार्थी तथा पाँच शिक्षकमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
त्यस्तै राप्ती बाल एकेडेमीमा अध्ययनरत दुई विद्यार्थी र जनता संस्कृत माविका एक शिक्षिकामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । विद्यार्थी तथा शिक्षकमा कोरोना देखिएपछि अस्वारा माविलाई एक हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ । पछिल्लो समय शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको भन्दै यसका लागि सचेत हुन आवश्यक रहेको केसीले बताए । “विद्यार्थी र शिक्षकमा नै कोरोना देखिएको छ”, उनले भने, “यसले स्थिति भयावह ल्याउन सक्छ, त्यसैले सचेतना फैलाउन आवश्यक छ ।”
विद्यालयमा नै बढी देखिएकाले केही समयका लागि विद्यालय बन्द गर्ने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार प्रायः कोही भारतबाट आएका हुन्, भने कोही पोखरा, काठमाडौँलगायतका स्थानमा ‘टुर’ गएका रहेका छन् । उनीहरुमा घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने समस्या देखिने गरेको छ । प्रायः भेरोसेल, कोभिसिल्ड खोप लगाएकालाई नै सङ्क्रमण देखिएको र लक्षण पनि देखिने गरेको छ ।